रङ्गीन जादू « Harekpal
रसुवा, २६ कात्तिक ।“ओइ ! ऊ त्यहाँ हेर् त कति राम्रो हाम्रो घुम्ती बजार”, एकले भने । “हो त नि है, हेर न ऊ त्यो कालिकास्थान पनि आम्मा..म्मा ! गणेश हिमाल त झन् ठ्याक्कै मिलेको”, अर्को रौसिँदै बोले । “यसमा हेर् न यसमा, त्यही तलको बोर्डिङ स्कूल होइन ?, लौ म पनि रैछु त यहाँ”, तेस्रोले भन्यो ।”
रसुवाको कालिका गाउँपालिका–२ स्थित कालिकास्थानमा आफ्नै परिवेश फरक माहोलमा हेरेर दङ्ग बने बालबालिका । वृद्धवृद्धा, तरुण युवाहरु पनि रङ्गीन जादू देखेर मख्ख भए । त्यहाँ प्रकृतिका सबै सुन्दरता रङ्गीन इन्द्रेणी धर्तीमा उत्रिएझैँ रमणीय थियो । भनिन्छ, एउटा चित्रले एक हजार शब्द बोल्छ । एक अर्कोसँग अनेक रङबाटै संवाद गर्दछ । अनि त्यो कलाकार सफल हुन्छ, जसले मानिसलाई चित्रसँग संवाद गर्न बाध्य बनाउँछ । मानिसलाई सधैँ साक्षात्कार भइरहेको गाउँ–ठाउँका दृश्यमा चासो जाँदैन । जब उनीहरुले रङको जादू देखे, तब आफू वरपरको सुन्दरता मनभित्रैबाट अनुभूत गरे । अनि भने, “साँच्चै नै अति सुन्दर रहेछ यो थलो ।”
शनिबार त्यस्तै संयोग मिल्यो कालिका गाउँपालिकाका बासिन्दालाई । सधैँ हेरिरहेका दृश्य क्यान्भासमा देखेपछि गाउँलेहरु दङदास भए । उनीहरुले चित्रमा समेटिएका दृश्यसँग हृदय खोलेर संवाद गरे । साउतीको भाषामा वार्ता गर्न पनि भ्याए । कतिपय स्थानीयवासीका जिज्ञासु स्वभाव अनुहारले झल्काउँथ्यो । कतिपयले मुख फोरेरै सोध्न भ्याए । ‘रसुवा कला यात्रा’मा सहभागी १५ कलाकारको एक समूह यत्रतत्र छरिएर यहाँका दृश्य क्यान्भासमा सिर्जना गरेको गाउँले पहिलोपटक देखेका हुन् ।
सधैँ खुला आँखाले देखिरहेकाले स्थानीयवासीका लागि कालिकास्थान मन्दिर, घुम्ती बजार, झुल्के घाममा देखिने सुनौलो गणेश हिमाल, दक्षिणपट्टिको बेत्रावती र नुवाकोट, नागबेली भएर कलकल बग्दै गरेको त्रिशूलगङ्गा र फलाखु खासै महत्वको लाग्दैनथ्यो । कलाकारका नौला गतिविधिले अच्चम्मित हुनुभएकी स्थानीय होटल सञ्चालक मीरा पुडासैनी आँखै अगाडि ती दृश्य उनिएको देखेरै छक्क पर्नुभयो । ती दृश्य क्यान्भारमा देखेपछि उहाँमा अनौठो कौतुहल जाग्यो । “लौ ! अहिलेको–अहिल्यै, दुरुस्तै बन्यो, कस्तो जादू हो यो”, कलाकारको हातको सीपलाई उहाँले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्दै भन्नुभयो ।
स्थानीय विजय ढकाल र भानुभक्त पुडासैनीले पनि नियाल्नुभयो । चित्रसँग मनमनै बात मार्नुभयोे । दैनिक देखिरहेका क्षेत्रलाई क्यामराले कैद गरेझैँ कलाकारले उस्तै पारेर रङ भरे । गाउँलेलाई थरिथरिका रङमा कुची चोप्दै क्यान्भास रङ्ग्याएर चित्र बनाइन्छ भन्ने थाहा थिएन । कालिकास्थान चित्रमा देख्दा पुडासैनीको मुहारमा जिज्ञासा र खुशीको मिश्रित भाव देखियो ।
स्थानीय पुष्पराज न्यौपानेले चित्र नियाल्दै भन्नुभयो, “नौलो सिर्जना आफ्नै आँखाले देख्न पायौँ, चित्रले धेरै कुरा बोल्दोरहेछ ।” यस्ता गतिविधिले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने उहाँले आशा व्यक्त गर्नुभयो । गत वर्षमात्रै पुरातत्व विभागको टोली आएर धैवुङकोटको उत्खनन गरेको थियो । उनीहरु यहाँको कोट घर पत्ता लगाएर फर्किएका स्थानीयवासीले बताए ।
यहाँ कमारेगढी, नीलकण्ठ महादेवको मन्दिर पनि छ, स्वाउबारी पर्यटकीय महत्व बोकेको क्षेत्र हो । धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा कालिकास्थान छ । ती क्षेत्र उजागर हुननसकेका बेला कलाकारले यहाँका महत्वपूर्ण क्षेत्र र देखिने दृश्यलाई चित्रमा उतारेर उत्साह जगाइदिएकामा कालिका गाउँपालिका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपाने खुशी हुनुभयो । चित्र हेरेर उत्साहित हुनुभएका उहाँले अब चित्रकारसँग हातेमालो गरेर जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
स्थानीय कलाकार डिल्लीराज घिमिरेले काठमाडौँबाट आएर पर्यटन प्रवद्र्धनका साथै कलाको महत्व बुझाउन चित्रकलाले प्रोत्साहन मिलेको भन्दै आफ्नो प्रयास सार्थक भएको महसुस गर्नुभयो । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपेन्द्र लम्सालले नचिनेको ठाउँलाई चित्रले सजिलै चिनाउन सक्ने भएकाले यहाँको महत्वलाई चित्रमा उतारेर विश्वमा परिचित गराउने कलाकारको प्रयासको सराहना गर्नुभयो ।
यही कात्तिक २१ देखि २४ गतेसम्म कलाकार दिवेश प्रधानको नेतृत्व तथा स्थानीय कलाकार शशि डङ्गोलको संयोजनमा चित्रकार राकेशचन्द्र श्रेष्ठ, दीपेन्द्रमान बनेपाली, कान्छाकाजी भासीमा, विक्रम प्रजापति, प्रकाश मानन्धर, झलक केसी, पुण्यराम मातँ, सूर्यराम सुवाल, राधेश्याम कर्माचार्य, लष्मीप्रसाद खोतेजा, तथागत चित्रकार, रुविन बाडेले यहाँका दृश्य एक्रेलिक र जलरङको माध्यमबाट क्यान्भासमा सिर्जना गरेका थिए ।
धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिने रसुवाको सदरमुकाम धुन्चेबाट २४ किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा कालिका गाउँपालिका छ । यहाँबाट दक्षिण बेत्रावतीका साथै नुवाकोटका विभिन्न क्षेत्रको दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । उत्तरमा गणेश हिमाल मुस्कुराइरहेको हुन्छ । पश्चिममा नुवाकोट र रसुवाका अग्ला पहाड, भिरालो परेका बस्ती, हरियाँ फाँट र पूर्वमा जिल्लाकै जीवजीवे र समरथली छ ।
प्राकृतिक छटाको कलात्मकता त्यसै पनि सुन्दर हुन्छ । अझ त्यसमा रङको जादू थपेर दोहोरो सुन्दरता अभिव्यक्त गर्न सफल बने कलाकार । प्रकृति र धार्मिकस्थलको मनोरम सङ्गमका रूपमा परिचित कालिस्थान यहाँको मुख्य आकर्षणको केन्द्र हो । यहाँको माथिल्लो भागमा रहेको स्याउबारी र गणेश हिमाललगायत प्रकृतिक दृश्य पर्यटनको आकर्षक गन्तव्य मानिन्छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को पूर्वसन्ध्यामा कलाकारको जादूले गाउँको सुन्दरतालाई पर्यापर्यटनसँग जोडेर प्रवद्र्धन भएकामा गाउँलेमा उल्लास थपिएको छ । रसुवा र नुवाकोटको सीमाक्षेत्र बेत्रावती (उत्तरगयाधाम) नजिक रहेको कालिका गाउँपालिका हुँदै लाङटाङ हिमाल, गोसाइँकुण्ड र केरुङ नाका जाने महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग हुनाले यहाँको महत्व देश विदेशमा फैलाउनु जरुरी रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् । उत्तरगयामा आउने धार्मिक पर्यटकलाई जोड्न सके पनि यहाँको विकासले फड्को मार्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।रासस